သူဌေးကတော်မမလေး - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ၊ စနေနေ့ ဖြစ်သည်..။ ဒီနေ့ ဒီရက်ဟာ အခြားသူတွေ အတွက်တော့ ထူးခြားမည် မဟုတ်သော်လည်း ကိုခင်ကျော် နှင့် မအေးအေးဝင်းတို့ အတွက်တော့ ထူးခြားသည့် နေ့ရက် တစ်ရက် ဖြစ်သည်..။
သူတို့နှစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်သာ ရှိသေးသည်..။ ချစ်လို့ ခင်လို့ ချလို့ လိုးလို့ မဝသေးပဲ ကောင်းတုန်း…။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ချစ်တင်းနှီးနှော ကာမစပ်ယှက်ကြရသည့် အချိန်များက နည်းပါးလှသည်..။ ဒါကလည်း ကျန်းမာရေ ချို့တဲ့နေကြလို့ မဟုတ်..။ သူတို့၏ ကြီးပွားရေး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်သည်..။
အေးအေးဝင်းသည် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ အစိုးရဌာနတစ်ခုတွင် အရာရှိမ တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည်..။ ခင်မောင်ကျော်ကတော့ အစိုးရ အလုပ်မလုပ်.. ကိုယ်ပိုင် အရောင်းအဝယ် အလုပ်သာ လုပ်သည်..။ အသက်အရွယ်ကလည်း ငယ် ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကလည်း ကောင်း ၊ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ကောင်းသည့်အတွက် စီးပွားဖြစ်ခဲ့သည်..။ ငွေတွေရသလောက် အလုပ်ကိုလည်း နေ့နေ့ညညဆိုသလို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ပေရာ ၊ ခင်မောင်ကျော် မှာ မယားချောလေးနဲ့အတူ ကာမစပ်ယှက်ရန် အချိန် မပေးနိုင်ခဲ့..။ သို့ပေမယ့် လတစ်လ၏ ပထမဆုံးသော စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်တော့ လုံးဝ အားလပ်ခွင့်ယူကာ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး လိုးကြဆော်ကြဖို့ ရက်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်..။
ထိုနှစ်ရက်တွင် ခင်မောင်ကျော် သည် စီးပွားရေး အလုပ်များကို ရပ်နားသည်..။ အိမ်ရှိ ထမင်းချက်နှင့် အိမ်ဖော် မိန်းကလေးတို့ကိုလည်း အားလပ်ခွင့် ပေးလိုက်သည်..။ အေးအေးဝင်း၏ ကားကို မောင်းသော ဒရိုင်ဘာ ကျော်မိုးသာလျင် အိမ်တွင် ရှိသည်..။ သို့သော် ကျော်မိုး၏ ကားဂိုဒေါင်မှာ အိမ်နှင့် သီးခြားဖြစ်ပြီး ကျော်မိုးသည် ကားဂိုဒေါင် အပေါ် ထပ်ခိုးပေါ်တွင် နေရသောကြောင့် အေးအေးဝင်းနှင့် ခင်မောင်ကျော်တို့ နှစ်ယောက်မှာ အိမ်ပေါ်တွင် လွပ်လွပ်လပ်လပ်နှင့် စိတ်တိုင်းကျ အပျော်ကြူး ကာမစပ်ယှက်နိုင်သည်..။
အေးအေးဝင်းသည် မြန်မာ အမည်ခံယူထားသော်လည်း တရုတ်မ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်..။ ခေတ်ပညာတတ်သော်လည်း အရှက်အကြောက် ကြီးသည်..။ အေးအေးဝင်း၏ မိဘများသည် ရှေးဆန်သော တရုတ်မိသားစုများ ဖြစ်ကြပေရာ အေးအေးဝင်းကို အထူးပင် ကြပ်မတ်အုပ်ထိန်းထားခဲ့ကြသည်..။
ခင်မောင်ကျော်သည် အေးအေးဝင်းကို ကာမစပ်ယှက်မှုသည် ရှက်စရာ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံရန်အတွက် တော်တော်လေးပင် ပြောဆိုစည်းရုံးခဲ့ရသည်..။ ခင်မောင်ကျော်အဖို့ ဇနီးချောလေးကို ကိုယ်လုံးတီးချွတ်၍ ကာမစပ်ယှက်နိုင်သည်မှာ သုံးလပင် မပြည့်သေး..။ လီးစုပ်ပေးရန်ကိုကား တစစ ပြောဆို သိမ်းသွင်းနေရဆဲ ဖြစ်သည်..။
တရုတ်မလေး အေးအေးဝင်းကို ကာမစပ်ယှက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရဲတင်းလာရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရာတွင် ခင်မောင်ကျော်က အပြာကားများကို အသုံးချခဲ့သည်..။ ပထမတွင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း နမ်းစုပ်ခန်း ၊ ဝတ်လစ်စလစ် ပွေ့ဖက်ကိုင်တွယ်ခန်းများ ပါသည့် ကားတွေကို ပြသည်..။ ထို့နောက် ဂျပန်ကားများကို ပြကာ သိမ်းသွင်းသည်..။ နောက်တော့မှ သိပ်မကြမ်းသည့် အပြာကားများကို ပြခဲ့သည်..။
အပြာကား စပြသည့်နေ့က ခင်မောင်ကျော်အဖို့ မိမိ၏ လီးအား အေးအေးဝင်းကို လက်ဖြင့် စ၍ ကိုင်တွယ်ပေးစေနိုင်ခဲ့သည်..။ နောက်တော့ ဆုပ်ကိုင် ဂွင်းတိုက်ပေးသည့်အဆင့်ထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်..။ ယနေ့တွင်တော့ အေးအေးဝင်းကို လီးစုပ်ခိုင်းရန် နှင့် အခွင့်သာမည် ဆိုပါက ဖင်ကိုပါ လိုးရန် ခင်မောင်ကျော်က ကြံရွယ်ထားသည်..။ ထို့ကြောင့် လီးစုပ်ခန်းနှင့် ဖင်ဆော်ခန်းများ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပါဝင်သည့် အပြာကားထုပ်ကို အထူးရွေးချယ်ကာ ငှါးရမ်းလာခဲ့သည်..။
အေးအေးဝင်းသည် ခုမှ အသက် ၂၅ နှစ်ခန့်သာ ရှိသေးသည်..။ အသားဖြူဝင်းကာ ရင်ထွားထွား ၊ တင်ကားကား ၊ ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်နှင့် ကိုယ်ကာယ အထူးပင် တောင့်တင်း ဖွံ့ထွားသည်..။ ကျန်းမာရေးကောင်းကာ သွေးသား ဆူဖြိုးလျက် တရုတ်မပီပီ နှာလည်း ထန်သည်..။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အုပ်ထိန်းခြင်း ခံခဲ့ရသည့် အတွက်ကြောင့်သာ အရှက်အကြောက် ကြီးနေခြင်း ဖြစ်သည်..။
ခင်မောင်ကျော်က အပြာကားတွေ ပြသကာ သိမ်းသွင်းသည်တွင် အေးအေးဝင်းမှာ ရမ္မက်စိတ်တွေ ထက်သန် တက်ကြွလာရသည်..။ ဤတွင် သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ချစ်ခင်ပြီး တရားဝင် လက်ထပ်ယောက်ျားလည်း ဖြစ်သော ခင်မောင်ကျော်ထံမှောက်တွင် အရှက်အကြောက်တွေကို တစ်ထစ်ချင်း ဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်..။ ဗြုန်းစားကြီး ရက်ရက်ရောရော ကာမစပ်ယှက်မှုကို မပြုရဲ သော်လည်း တစစတော့ ခင်မောင်ကျော်၏ စိတ်တိုင်းကျ လိုက်လျောလာရပေးမည်..။
ခင်မောင်ကျော်မှာလည်း အသက် ၂၈ နှစ်ခန့် ရှိကာ တရုတ်အစစ် မဟုတ်သော်လည်း တရုတ်ကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်..။ ကာမအားလည်း သန်သည်..။
နံနက် ၁၀ နာရီ ………..။
ခင်မောင်ကျော်နှင့် အေးအေးဝင်းတို့ လင်မယားသည် ခုတင်ခေါင်းရင်းကို ကျောမှီကာ ယှဉ်ထိုင်နေကြရင်း တီဗီပေါ်မှ ထင်ဟပ်ပြသနေသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ကြည့်နေကြသည်..။ ပြကွင်းပေါ်တွင်မူ မော်တော်ကားကြီးတစ်စီး စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှေ့တွင် ရပ်ပြီး ကားမောင်းသမားသည် ကားပေါ်မှ ဆင်းလျက် ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားသည်..။ ထို့နောက် ပြကွင်းပြောင်းကာ ဆိုင်အတွင်းဘက် မြင်ကွင်းပေါ်လာသည်..။ ကောင်တာတွင် ထိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးကို အဓိကထား၍ ရိုက်ပြထားသည်..။
အမျိုးသမီးသည် အသက် ၂၀ ခန့်သာ ရှိသေးသည်.. ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့် ချောမောလှပသည့် ဗိုလ်မလေး ဖြစ်သည်..။ ထိုင်ခုံတွင် ခပ်ဟော့ဟော့လေး ထိုင်နေရာမှ လုံးကျစ်ထွားအိသော တင်သားဆိုင်များနှင့် တင်းရင်း ရှည်လျားသွယ်ပြောင်းသည့် ပေါင်လုံးပေါင်တန်များသည် တင်းကြပ်စွာ ဝတ်ထားသော အသားကပ် ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် အောက်တွင် ထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်နေသည်..။ တီရှပ် ခပ်ပါးပါး လေးကလည်း မို့ဝန်းချွန်ကော့နေသည့် ရင်သားဆိုင်များကို ပေါ်လွင်နေစေသည်..။ ကားမောင်းသမားသည် တံခါးကိုဖွင့်ကာ ဆိုင်ထဲ လျှောက်လှမ်း ဝင်ရောက်လာပြီး ကောင်မလေး ရှေ့မှ ထိုင်ခုံတွင် ဝင်ထိုင်သည်..။
“ ဆိုင် မသိမ်းသေးဘူးလား…ဂျိန်း….”
ဟု ကားမောင်းသမားက မေးသည်..။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ပညာတတ်များ ဖြစ်သည်မို့ ကောင်းစွာပင် နားလည်ကြသည်..။
“ သိမ်းကာနီးပါပြီ…..မိုက်ကယ်…၊ မင်းရောက်လာပြီ ဆိုတော့ အခုပဲ သိမ်းလိုက်တော့မယ်…၊ ဒါမှ တို့အတွက် အချိန်ပိုရမှာ…”
ဂျိန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူ ဗိုလ်မလေးက ခပ်ပြုံးပြုံးလေး ပြန်ပြောသည်..။ ဤမျှလောက် ကြည့်ရလျင် မကြာခင် ဗိုလ်မလေးကို မိုက်ကယ်ဆိုသူက လိုးတော့မှာ အေးအေးဝင်း သိလိုက်သည်..။
အေးအေးဝင်းသည် ကောင်မလေးကို လိုးပြတော့မည့် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်ကို သေသေချာချာ ကြည့်သည်..။ မိုက်ကယ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူသည် အသက် ၃၀ ခန့် ရှိပြီး အသားမည်းမည်း ကပ္ပလီကပြား တစ်ယောက်ဖြစ်သည်..။ အဝေးပြေး ကားမောင်းသမား ရုပ်ပီသသည်..။ မုတ်ဆိတ်မွှေး နှုတ်ခမ်းမွှေး သဲ့သဲ့ ရှိသည်..။ မျက်နှာလေးထောင့်ကျကျနှင့် ရုပ်ရည် ကြမ်းတမ်းသည်..။ ရုပ်ရည် ကြမ်းကြမ်းနှင့် အသားမည်းမည်း လူကြမ်းကြီးတစ်ယောက်က ဖြူဖြူနုနု ချောမောလှပသည့် ဗိုလ်မလေးကို လိုးတော့မှာမို့ တွေးရင်း ကောင်မလေးအား သနားမိသလိုလို အေးအေးဝင်း ခံစားရသည်..။
ပြကွင်း ပြောင်းသွားသည်..။ အပြာကားများ၏ ထုံးစံအတိုင်း အပိုတွေ သိပ်မပြပါ..။ ပြောင်းသွားသည့် ပြကွင်းမှာ လူရှင်းပြီး မီးမှောင်နေသည့် ဆိုင်အတွင်း ပြကွင်းကို ခဏ ပြပြီးနောက် အိပ်ခန်းတစ်ခုကို ပြောင်းသွားသည်..။ အိပ်ခန်းထဲသို့ ကောင်မလေးက ရှေ့ဆောင်ဝင်ကာ ကပ္ပလီကြီးက နောက်မှ လိုက်လာသည်..။ ကောင်မလေး၏ တသိမ့်သိမ့် လှုပ်သွားသော တင်သားများကို အသားပေးပြသည်..။ ကောင်မလေးသည် ခုတင်ဘေးတွင် ခပ်ကြွကြွလေး ရပ်သည်…။
မိုက်ကယ်က မိမိလိုးရတော့မည့် မိန်းမကို အားရပါးရ ကြည့်သည့်သဘောမျိုးဖြင့် ကင်မရာသည် ကောင်မလေး၏ ခေါင်းကနေ ခြေဖျားတိုင် အနီးကပ် တဖြည်းဖြည်းချင်း ရွေ့လျားကာ ရိုက်ပြသည်..။ ထို့နောက် မိုက်ကယ်က ဂျိန်း၏ တီရှပ်ကလေးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ အတွင်းခံ ဘရာစီယာပင် စည်းနှောင်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် မို့ဝန်းသော ရင်သားဆိုင်နှစ်ခုသည် အထင်းသား ပေါ်လာသည်..။ နောက် ကောင်မလေး၏ ဘောင်းဘီကို ဆက်ချွတ်သည်..။
ထိုအချိန်တွင် ခင်မောင်ကျော်ကလည်း ဇနီးချော ကလေး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်တွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ခပ်သွက်သွက်ပင် ချွတ်ပစ်နေသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ပြကွင်းပေါ်ရှိ စုံတွဲ၏ အဝတ်ချွတ်ပေးနေပုံများကို ကြည့်ရင်း ခင်မောင်ကျော် ပြုသမျှကို မသိကျိုးကျွန် ပြုပြီး ငြိမ်ခံနေသည်..။ အေးအေးဝင်း ဝတ်ထားသော အပေါ်အင်္ကျီ ကျွတ်သွားသည်..။ နောက်တော့ အတွင်းခံ ဘရာစီယာ၏ ချိတ်ကို ခင်မောင်ကျော်က ဆက်ဖြုတ်သည်..။ ဘရာစီယာသည် ထစ်ခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ပြုတ်ကာ ကျွတ်ကွာကျသွားသည်..။
အေးအေးဝင်း၏ ရင်သားဆိုင်များသည် ဖြူနုကာ လုံးဝန်းနေသည်..။ ခင်မောင်ကျော်သည် ဇနီးချောလေးကို အလွန်ချစ်သည့်အတွက် ရင်သားများကို ဘယ်တော့မှ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း မကိုင်…။ ခပ်ဖြည်းဖြည်းသာသာလေး အုပ်ကိုင် ပွတ်သပ်သည်..။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည့်တိုင် အေးအေးဝင်း၏ ရင်သားဆိုင်များသည် အပျိုစင်ဘဝကနှင့် ဘာမျှ မခြားပဲ လုံးလုံးဝန်းဝန်း ဆူဆူဖြိုးဖြိုးလေးနှင့် လှပနေဆဲ..။ တင်းရင်းနေဆဲ ပဲ ဖြစ်သည်..။ ခင်မောင်ကျော်သည် အေးအေးဝင်း၏ ထမီကို ဆက်ချွတ်သည်..။ နောက်တော့ အတွင်းခံ ပင်တီလေးကိုပါ ချန်မထားတော့..။
ပြကွင်းပေါ်ရှိ ဗိုလ်မလေး ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားချိန်တွင် အပြင်ဘက်ရှိ အေးအေးဝင်းသည်လည်း ဗလာကျင်းသွားလေပြီ..။ ကပ္ပလီကြီးက သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်တွေကို ဆက်ချွတ်သည်..။ ထိုသို့ ကပ္ပလီကြီး အဝတ်တွေ ချွတ်နေပုံကို အေးအေးဝင်းက စူးစိုက်ကြည့်နေသည်..။ ထိုအချိန်တွင် ခင်မောင်ကျော်ကလည်း သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်တွေကို သွက်လက်မြန်ဆန်စွာပင် ချွတ်ခွာချလိုက်သည်..။
အေးအေးဝင်းသည် ခင်မောင်ကျော် အဝတ်ချွတ်နေသည့်ဖက်သို့ လှည့်မကြည့်နိုင်..။ ကပ္ပလီကြီး အဝတ်ချွတ်နေသည့် မြင်ကွင်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေမိသည်..။ အေးအေးဝင်း ယခင်ကြည့်ဖူးခဲ့သည့် အပြာကားများတွင် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်များသည် လူဖြူဘိုများသာ ဖြစ်ရာ မြင်ခဲ့ရသည့် လီးတွေကလည်း အဖြူတွေချည်းသာ ဖြစ်သည်..။ သူ့လင် ခင်မောင်ကျော်မှာလည်း တရုတ်ကပြားဖြစ်၍ လီးကလည်း ဖြူသည်..။ ကပ္ပလီကြီး၏ လီးမည်းမည်းကြီးသည် အေးအေးဝင်းအဖို့ အဆန်းမို့ စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်နေခြင်း ဖြစ်သည်..။
နောက်ဆုံး ကျန်နေသော အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်၍ တန်းခနဲ ပေါ်လာသည့် ကပ္ပလီကြီး၏ လီးကို မြင်ရသောအခါ အေးအေးဝင်း၏ ရင်ထဲတွင် ဒိန်းခနဲပင် ခုန်သွားရသည်..။ မည်းနက်နေသည့် လီးကြီး၏ အရောင်အသွေးကပင် အသည်းယားစရာ…။ ပြီးတော့ လီးကြီးက ကြီးမားထွားကြိုင်းလွန်းလှသည်..။ အေးအေးဝင်း စိတ်ထင် ထိုလီးကြီးသည် မရှိဘူးဆို ဆယ်လက်မလောက်တော့ ရှည်မည်..။ လုံးပတ်ကလည်း ကိုကာကိုလာ သံဗူးလောက်ကို တုတ်သည်..။ မာန်ထကာ တောင်မတ်နေချိန်မို့ ဒုံးပျံကြီးတစ်ခုလို တန်းနေလျက် လီးတန်လုံးပတ်တလျှောက်တွင် အကြောတွေ ပြိုင်းပြိုင်းထနေသည်မှာ မျှော့ကြီးများ ရစ်ပတ်နေသလားဟု ထင်ရသည်..။
အေးအေးဝင်း အလိုးခံဖူးသော ခင်မောင်ကျော်၏ လီးမှာ ရှစ်လက်မခန့် ရှည်လျားပြီး ကျပ်လုံးလောက် တုတ်သည်..။ ထို့ပြင် အပြာကားများထဲတွင် မြင်ဖူးသမျှဆိုပါက အကြီးဆုံးလီးသည် ကိုးလက်မ နီးပါးခန့်သာ ရှည်သည်..။ ယခုမြင်ရသည့် လီးမည်းကြီးကတော့ အေးအေးဝင်း မြင်ဖူးသမျှတွင် အကြီးဆုံး အတုတ်ဆုံး ဖြစ်သည်..။ ထိုလီးတန်မည်းမည်းကြီးသည် အေးအေးဝင်းကို ညှို့ယူဖမ်းစားလိုက်သည်..။ ဒီလို ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးတန် မည်းမည်းကြီးနှင့် အလိုးခံကြည့်ချင်သည့် စိတ်များလည်း တဖွားဖွား ပေါ်လာသည်..။
သို့သော် ကပ္ပလီကြီးသည် တီဗီထဲက ထွက်လာကာ အေးအေးဝင်းကို လိုးမည်မဟုတ်..။ သူနှင့်တွဲဖက် ဗိုလ်မလေးကိုသာ ကောင်းကောင်းလိုးပြမည်..။ ထို့ကြောင့် အေးအေးဝင်းသည် သူမကို လက်တွေ့လိုးပေးနိုင်သည့် လင်တော်မောင်၏ လီးဖြူဖြူကိုသာ လက်ဖြင့် လှမ်းဆုတ်ကိုင်လိုက်ရသည်..။ ဆိုးတော့ မဆိုးပါ..။ ပြကွင်းပေါ်ရှိ လီးမည်းမည်း ထွားထွားကြီးကို သေသေချာချာကြည့်ရင်း ခင်မောင်ကျော်၏ လီးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရာ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် လီးမည်းကြီးကို ကိုင်ထားရသလိုမျိုးတော့ ခံစားရသည်..။
“ ကိုယ့်လီးကို စုပ်ပေးလေကွယ်….”
ကပ္ပလီကြီးက ဗိုလ်မလေးကို လှမ်းပြောသည်..။
“ ဟွန်း…သူကတော့ ဒါပဲ…”
ကောင်မလေးက ပြုံးပြုံးလေး ပြောကာ ၊ ကပ္ပလီကြီး၏ ခြေရင်းတွင် ဒူးတုပ်ထိုင်ချလိုက်သည်..။ ကင်မရာ၏ ရိုက်ကွင်းက ပြောင်းသွားသည်..။ ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသော လီးတန်မည်းမည်းကြီးကို အနီးကပ် ရိုက်ပြသည်..။ ပြကွင်းတစ်ခုလုံးတွင် လီးမည်းမည်းတုတ်တုတ်ကြီးဖြင့် ပြည့်နေသည်..။ လီးကြီးကို အသေးစိတ် သေသေချာချာ မြင်ရပေရာ အေးအေးဝင်းမှာ စိတ်အထူးလှုပ်ရှားလာလျက် ဆုပ်ကိုင်ထားသော ခင်မောင်ကျော်၏ လီးဖြူဖြူကို ဂွင်းတိုက်ပေးမိသည်..။ နောက်တော့ ကင်မရာက နောက်ဆုတ်လိုက်ရာ လီးမည်းမည်းကြီး၏ အနားတွင် မော့မော့လေး ပြုထားသော ကောင်မလေး၏ မျက်နှာ ပေါ်လာသည်..။
ကောင်မလေး၏ သေးသွယ်ပျော့ပျောင်းသော လက်ကလေးတစ်ဖက်ကို ဆန့်ထုတ်ကာ လီးမည်းမည်းကြီးကို ဆုပ်ကိုင်သည်..။ လီးကြီးက ကြီးမားမည်းနက်လျက် သွယ်ပြောင်းသည့် လက်ချောင်းဖြူဖြူလေးများနှင့် ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပုံမြင်ကွင်းသည် တကယ်ပင် အသည်းယားစရာ..ကောင်းလှသည်..။ ခင်မောင်ကျော်၏ လက်များက အေးအေးဝင်း၏ ရင်သားဆိုင်များကို ခပ်ရွရွလေး ပွတ်သပ်လာသည်..။
ထို့နောက် ကောင်မလေးသည် ပါးစပ်လေးကို အစွမ်းကုန် ဟကာ လီးထိပ်ဖျားကို ငုံလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ အသာရှေ့သို့တိုးလိုက်ရာ ငုံမိထားသော လီးကြီးသည် ကောင်မလေး၏ ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်သွားသည်..။ အဆုံးထိတော့ မဝင်..။ တစ်ဝက်မရှိတရှိသာ ဝင်၏..။ ကောင်မလေးသည် ပါးလေးများ ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက် ဖြစ်အောင် စုပ်ပေးရာ လီးစုတ်သံ တပြွတ်ပြွတ်ကို ပင် အေးအေးဝင်း အတိုင်းသား ကြားရသည်..။
အေးအေးဝင်းသည် ထိုလီးမည်းမည်းကြီးကို စုပ်ချင်စိတ်တွေ ဟုန်းခနဲ ထလာသည်..။ ထို့ကြောင့် ခင်မောင်ကျော်၏ လီးကိုပင် လီးမည်းကြီးဟု သဘောထားကာ ကုန်း၍ စုပ်ပေးလိုက်မိတော့သည်..။
အထူးအထွေ မတိုက်တွန်းရပါပဲ အေးအေးဝင်းက လီးကို စုပ်ပေးလာ၍ ခင်မောင်ကျော် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်ကာ ပါးစပ်မှ အသံတွေပင် ထွက်သွားသည်..။
ထိုအချိန်တွင် ပြကွင်းထဲရှိ ကပ္ပလီကြီးကလည်း ကောင်မလေး၏ လီးစုပ်ပေးမှုကို ကျေနပ်စွာအံကြိတ် ရေရွတ်လိုက်သည်နှင့် အံကိုက် တိုက်ဆိုင်သွားရာ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် ထိုလူကြီး၏ လီးမည်းမည်းကြီးကို မိမိပါးစပ်ဖြင့် စုတ်ပေး၍ ထိုလူကြီး ကျေနပ်သဘောကျသွားသည့်အလား ခံစားရကာ ပြကွင်းပေါ်ရှိ ကောင်မလေးနှင့် အပြိုင်ပင် ခင်မောင်ကျော်၏ ငပဲကြီးကို သဲသဲမဲမဲပင် အားရပါးရ စုပ်ပေးနေသည်..။
ကောင်မလေးသည် လီးချောင်းကြီးကို စုတ်ပေးရာမှ ပါးစပ်ကိုခွာကာ ဂွေးဥမည်းမည်းကြီးများကို ကုန်း၍ စုပ်ပေးပြန်သည်..။ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် ဂွေးဥကို စုတ်ပေးလိုစိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာသည်..။ အကယ်၍ ထိုအချိန်တွင် ခင်မောင်ကျော်ကသာ အေးအေးဝင်း၏ ခေါင်းကို အောက်သို့ဆွဲချပြီး ဂွေးဥကို ယက်ခိုင်းစုပ်ခိုင်းပါက အေးအေးဝင်းအနေဖြင့် မငြင်းတမ်းပင် ပြုလုပ်ပေးမှာ သေချာသည်..။ သို့သော် လီးစုတ်ပေးတာကိုပင် အတော်ဟုတ်ပြီ ထင်နေသော ခင်မောင်ကျော်သည် ရှေ့သို့ သိပ်အတင့်မရဲဝံ့သေး..။
ခင်မောင်ကျော်က လမ်းပြ တောင်းဆိုခြင်း မပြုသည့်အတွက် အေးအေးဝင်းမှာ ဂွေးဥများကို စုတ်ကြည့်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း သူမကိုယ်တိုင် စတင်၍ မပြုလုပ်ရဲပေ..။ ထို့ကြောင့် လီးကိုသာ ပို၍မဲကာ စုပ်ပေးနေရာ ခင်မောင်ကျော်မှာ ရင်ထဲ ဖိုအေးကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေထလျက် အလွန်ပင် ဇိမ်တွေ့နေလေသည်..။
ပြကွင်းက ပြောင်းသွားပြန်သည်..။ လီးစုပ် ဂွေးဥယက်ပေးနေပုံကို အဝေးမှ ရိုက်ပြသည်..။ ကပ္ပလီကြီးက ကောင်မလေး၏ ခေါင်းကို အသာဆွဲကာ ကောင်မလေး ပါးစပ်မှ သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်..။
“ ကုတင်ပေါ် တက်ကြစို့ …”
ကပ္ပလီကြီးက ပြောသည်..။ ကောင်မလေးသည် မဆိုင်းမတွပင် ကုတင်ပေါ် တက်ကာ ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်သည်..။ ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်နေသည့် ကောင်မလေးကို အနီးကပ် ရိုက်ပြထားသည်..။ ကောင်မလေးက ပေါင်လုံးကြီးနှစ်လုံးကို အဆင်သင့်ပင် ကား၍ ပေးထားရာ စောက်ဖုတ်ကြီး ပြဲအာလျက် စပ်ယှက်ရာ စောက်ခေါင်းပေါက်ကလေးက ထင်ရှားစွာ ပေါ်နေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးက ကားထားသော ပေါင်လုံးကြီးနှစ်ခုအကြားတွင် ဝင်ကာ နေရာယူသည်..။ ကင်မရာက ရှေ့သို့ တိုးလာသည်..။ လီးတန်မည်းမည်းနက်နက်ကြီး ဖြူနုနေသည့် စောက်ဖုတ်ဝတွင် တေ့ထောက်လိုက်ပုံကို အနီးကပ် ရိုက်ပြသည်..။ ထို့နောက် ကင်မရာက နောက်သို့ ပြန်အဆုတ်တွင် ကပ္ပလီကြီးက ခါးကော့လျက် လီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်..။
လီးတန်မည်းမည်းတုတ်တုတ်ကြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲ သို့ ချိုင့်ဝင်အောင် နစ်မြုတ်သွားသည်ကို အသည်းယားဖွယ်ရာ မြင်နေရသည်..။ အေးအေးဝင်း မနေနိုင်တော့..။ အလိုးခံချင်စိတ်များက ထိန်းမနိုင်တော့အောင် ဖြစ်လာသည်..။ ထို့ကြောင့် လီးစုပ်ပေးနေရာက အသာခွာပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်အိပ်လိုက်သည်..။ ခင်မောင်ကျော်ကလည်း အထာပေါက်ကာ အေးအေးဝင်း၏ ကိုယ်ပေါ်တက်ခွလျက် ပေါင်ကြီးကို ဖြဲထားလိုက်သည်..။
အေးအေးဝင်းသည် မျက်စိကို မှိတ်ထားသည်..။ ခင်မောင်ကျော်၏ လီးက အေးအေးဝင်း၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လျှောခနဲ တိုးဝင်လာသည်..။ ထို့နောက် ခင်မောင်ကျော်သည် သွက်သွက်လေးပင် ဆောင့်လိုးသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ခင်မောင်ကျော် ဆောင့်လိုးနေတာကို ခံရင်း အသာမျက်စိကို ခပ်မှေးမှေး ဖွင့်ကာ တီဗီပြကွင်းကို လှမ်းကြည့်သည်..။ အေးအေးဝင်းအိပ်နေသည့် နေရာမှဆိုလျင် မြင်ကွင်းကို ကောင်းကောင်းမြင်ရသည်..။
ကပ္ပလီကြီးသည် ကောင်မလေး၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် တအားလိုးနေသည်..။ ကောင်မလေးသည် အောက်မှနေ၍ ဖင်ကြီးကို ကော့ကာပင့်ကာ လှုပ်ရှားပေးသည်..။ တုတ်ဖြိုးသော ပေါင်တန်ကြီးများကိုလည်း မြှောက်ကွေးကာ ပေးသည်..။ ထို့ပြင် တအားလိုးနေတဲ့ ကပ္ပလီကြီး၏ ကျောပြင်ကိုလည်း လက်ဖြူဖြူနုနုလေးများဖြင့် သိုင်းဖက်ရင်း ပွတ်ပေးနေသည်..။
အေးအေးဝင်းသည်လည်း ပြကွင်းပေါ်ရှိ ကောင်မလေး လုပ်သလို လိုက်လုပ်မိသည်..။ သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် သူမ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထိုးဝင်ပြန်ထွက်နှင့် လိုးနေသည်မှာ ခင်မောင်ကျော်၏ လီးဖြူဖြူ မဟုတ်ပဲ ကပ္ပလီကြီး၏ ဆယ်လက်မကျော် ရှည်လျားသည့် လီးမည်းမည်းတုတ်တုတ်ကြီး ဖြစ်သည်ဟု တွေးထင် ခံစားနေသည်..။
ကပ္ပလီကြီး၏ ဆောင့်ချက်များသည် အလွန်မြန် အလွန်ကြမ်းလှရာ စက်သေနပ်ပစ်နေသလားပင် ထင်ရသည်..။ အေးအေးဝင်းအဖို့ တစ်နှစ်သုံးလေး လိုက်လံရေတွက်သည်မှာပင် မမှီနိုင်တော့..။
အောက်မှ အလိုးခံနေသော ကောင်မလေးသည် မျက်တောင်လေး မှေးစင်းကာ နှုတ်ခမ်းလွှာ နီနီလေးကို ခပ်စူစူပြုလျက် လိုးနေသူကို တစ်စုံတစ်ရာ ပြောလိုက်သည်..။ ခင်မောင်ကျော်၏ ဆောင့်လိုးနေသံများကြောင့် အေးအေးဝင်း မှာ ကောင်မလေး ဘာပြောလိုက်သည်ကို မကြားမိတော့ပေ..။ ကောင်မလေး ပြောလိုက်သည်မှာ …
“ ငါလေးဖက်ကုန်းပေးမယ်…၊ ဖင်ထဲကိုထည့်ပြီး ဖင်လိုးပေးနော်….”
ဟူသတည်း…..။ ထိုစကားကိုသာ ကြားမိပါက အေးအေးဝင်း၏ စိတ်အစဉ် တစ်မျိုး လှုပ်ရှားမိမည်မှာ မလွဲပေ..။ ကပ္ပလီကြီးက ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး အဆောင့်ရပ်ကာ ကောင်မလေး၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးတန်ကြီးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်သည်..။ ကောင်မလေးသည် ချက်ချင်းပင် လှဲအိပ်နေရာမှ ထကာ ဒူးတုတ်၍ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ကာ ကုန်းပေးသည်ကို အေးအေးဝင်း မြင်နေရသည်..။
ကပ္ပလီကြီးသည် ကုန်းပေးထားသော ကောင်မလေး၏ ဖင်ကြီးနောက်တွင် ဒူးထောက်နေရာယူကာ ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလျက် စအိုဝတွင် သူ့လီးမည်းမည်းကြီးကို တေ့လိုက်ရာ ကြည့်နေသူ အေးအေးဝင်းမှာ ရင်ထဲ ဒိန်းခနဲ လှုပ်ရှားလျက် ခပ်မှေးမှေး ဖြစ်နေသော မျက်လုံးများပင် ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သွားသည်..။
အေးအေးဝင်း၏ ကိုယ်ပေါ် တက်ခွကာ လိုးနေသူ ခင်မောင်ကျော်မှာမူ ကျောပေးထားသဖြင့် ထိုမြင်ကွင်းကို မမြင်ရ..။ ဖင်ပြောင်ကြီး နိမ့်လိုက်ကြွလိုက်ဖြင့်သာ အားရပါးရ ဆောင့်လိုး၍ နေသည်..။
“ ကလင်… ကလင်… ကလင်…”
တယ်လီဖုန်း ခေါင်းလောင်းသံက ရုတ်တရက် မြည်လာသည်..။ ခင်မောင်ကျော်မှာ အတော်ပင် ထိတ်လန့်သွားမိသည်..။ ထိုတယ်လီဖုန်းသည် သာမန် ရိုးရိုး တယ်လီဖုန်း မဟုတ်..။ ခင်မောင်ကျော်၏ လူယုံတော် မန်နေဂျာ ကိုတိတ်ကြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသည့် အထူးသီးသန့် ရေဒီယို တယ်လီဖုန်း ဖြစ်သည်..။ အလွန်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားမှသာလျင် ဆက်သွယ်အသုံးပြုရသည်..။
ယခုလို အရေးပေါ် တယ်လီဖုန်း အသံမြည်လာသည့်အတွက် ကောက်ယူနားထောင် မကြည့်မီကပင် ၊ မိမိ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအရေးကြီးသည့် ကိစ္စတစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်ပြီ ဆိုခြင်းကို ခင်မောင်ကျော် နားလည်လိုက်သည်..။
ဇနီးချောလေးကို တက်လိုး၍ ကောင်းနေတုန်း ဖြစ်သော်လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို မျက်ကွယ်ပြု၍ မဖြစ်သောကြောင့် ခင်မောင်ကျော်သည် ထိုအရေပေါ် တယ်လီဖုန်းကို ကောက်ယူနားထောင်လိုက်သည်..။ လီးကိုကား အဖုတ်တွင် တပ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်..။ ဆောင့်လိုးနေခြင်းကာ မရှိတော့..။
အလိုးခံ၍ ကောင်းတုန်း အဆောင့်ရပ်သွားသောကြောင့် အေးအေးဝင်းမှာ အတော်ပင် မချင့်မရဲ နှင့် ဒေါသပင် ဖြစ်မိသည်..။ တယ်လီုဖုန်းကို နားထောင်နေရင်း ခင်မောင်ကျော်၏ မျက်နှာ ကွက်ခနဲ ပျက်သွားသည်..။ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးလည်း ချက်ချင်းပင် ပျော့ခွေကာ ကျွတ်ထွက်သွားသည်..။
“ ကျိုင်းတုံဖက်က ချလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပြဿနာ တက်နေလို့တဲ့….၊ ဒုက္ခပါပဲ… အေးရယ်…၊ မောင် လိုက်သွားမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်….”
ခင်မောင်ကျော်သည် တယ်လီဖုန်း ပြောပြီးသည်နှင့် အမောတကော ရေရွတ်ကာ အဝတ်အစားများ အမြန်ဝတ်ကာ ငွေအိတ်နှင့် အရေးပေါ် ခရီးဆောင်အိတ်ကို ဆွဲလျက် ကမန်းကတန်းပင် ပြေးထွက်သွားသည်..။ ယခုလို မကြာခဏ သွားရတတ်၍ အရေးပေါ် ခရီးဆောင်အိတ်ကို လိုအပ်သည်များ အသင့်ထည့်ကာ ပြင်ဆင်ထားရမြဲ ဖြစ်သည်..။ ခါတိုင်း အရေပေါ် ခရီးထွက်သည်က မဆန်းသော်လည်း ခုလို အချိန်အခါမျိုးတွင် ဗြုန်းစားကြီး ထွက်သွားရတာမျိုးတော့ မရှိခဲ့ဖူးသေးပေ…။
ကျိုင်းတုံမှ ပစ္စည်းများသည် ခင်မောင်ကျော်၏ စီးပွားရေး တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာစေနိုင်သလို ၊ ချွတ်ခြုံကျသွားစေလောက်အောင်လည်း ပြုနိုင်သောကြောင့် ခင်မောင်ကျော် မှာ ဇနီးချောလေးကို ပြီးအောင် ဆက်မလိုးနိုင်တော့ပဲ ကိုယ်လုံးတီးနှင့် အိပ်ခန်းထဲတွင် သည်အတိုင်း ထားရစ်ခဲ့ကာ အပြေးအလွှားပင် ထွက်ခွာသွားရပေတော့သည်..။
အေးအေးဝင်းသည် မကျေမနပ် ဒေါပွ၍ နေသည်…။ ဒါပေမယ့် ဘာကို ဒေါသဖြစ်ရမှန်းတော့ မသိ..၊ ကျိုင်းတုံမှ ပစ္စည်းတွေ အရေးကြီးမှန်းလည်း သိထားသည်မို့ အပြေးအလွှား ထွက်သွားရရှာသည့် လင်တော်မောင်ကိုလည်း အပြစ် မတင်လိုပါ..။
ကာမအရသာ ဆပ်တငံ့ငံ့ ဖြစ်သွားရမှုကြောင့် မချင့်မရဲနှင့် မကျေနပ်မှုတို့ကို သွန်ထုပ်ကာ တစ်ယောက်တည်း ငိုရှိုက်နေမိသည်..။ အားရအောင် ငိုလိုက်ရ၍ စိတ်ထဲအနည်းငယ် ပေါ့ပါးသွားသည်..။ တဏှာဇောရမ္မက်ကတော့ မပျောက်သေး..။ တငွေ့ငွေ့ လောင်မြိုက်နေဆဲ..။ အေးအေးဝင်း၏ နားထဲတွင် အသံများ ကြားနေရသည့်အတွက် မော့ကြည့်လိုက်ရာ တီဗီမှာ ပြသနေဆဲ ဖြစ်သည်ကို မြင်ရသည်..။ အောက်စက်ခလုတ်ကိုလည်း မပိတ်မိသေးသောကြောင့် အခွေက ဆက်လက်လည်ပတ်ကာ အပြာကား ပြကွက်များသည် ဆက်လက်ပေါ်လွင်နေဆဲ ဖြစ်သည်..။
လူသူ ကင်းရှင်းနေသည့် လမ်းမကြီးတစ်ခုဘေးနားတွင် ခပ်အေးအေး လျှောက်လှမ်းလာနေသော တရုတ်မလေးတစ်ယောက်ကို ပြကွင်းထဲတွင် မြင်ရသည်..။ ဇာတ်လမ်းက ဘယ်နေရာက ဘယ်လိုပြောင်းနေသည်ကိုကား အေးအေးဝင်း မသိတော့..။
ကားလမ်းပေါ်တွင် ကားနက်တစ်စီး အသာမောင်းလာနေပုံ တွေ့ရသည်..။ ကားသည် တရုတ်မလေး၏ ဘေးနားတွင် ရပ်သွားသည်..။ တရုတ်မလေး၏ အလန့်တကြား ဖြစ်သွားသည့် မျက်နှာကို အနီးကပ် ရိုက်ပြသည်..။ ထို့နောက် ကားပေါ်မှ လူတစ်ယောက် ခုန်ထွက်လာကာ တရုတ်မလေး၏ ခေါင်းကို ရိုက်ချလိုက်ရာ တရုတ်မလေး ခွေကျသွားသည်..။ သတိလစ်သွားပုံရသည်..။
ကားပေါ်မှ ခုန်ထွက်လာသူမှာ စောစောကအပိုင်းတွင် ဗိုလ်မလေးကို လိမ့်နေအောင် လိုးပြခဲ့သည့် ကပ္ပလီကြီးပင် ဖြစ်သည်..။ ထိုလူကြီးသည် ယခု တရုတ်မလေးကို လိုးပြဦးမည်ကို သိရသည်တွင် အေးအေးဝင်း ရင်ခုန်လာသည်..။ မျက်လုံးကလည်း ပြကွင်းမှ မခွာနိုင်တော့ ။ စက်ကိုပိတ်ကာ အေးအေးလူလူ အနားယူတော့မည်ဟူသော စိတ်ကူးတွေလည်း ပျောက်ကုန်သည်..။ ဇာတ်ကားကို ဆက်၍ ကြည့်နေမိသည်..။
ဒီအပြာကားကို ကူးထားလိုက်ရလျင် ကောင်းမည်လားဟု တွေးမိကာ ဗီဒီယိုရိုက်သည့် ကင်မရာကို လှမ်းကြည့်မိသည်..။ ထိုကင်မရာ ဝယ်ထားသည်မှာ မကြာသေး..။ ကင်မရာထဲတွင် ခွေလွတ်အသစ်တစ်ခွေကလည်း အသင့်ထည့်ထားပြီး ဖြစ်သည်..။ အောက်စက်က တစ်လုံးတည်းသာရှိရာ အကယ်၍ ကူးယူလိုပါက ပြကွင်းပေါ်တွင် ထင်နေသည်များကို ဗီဒီယိုကင်မရာဖြင့် ပြန်ရိုက်ယူရမည် ဖြစ်သည်..။ အချိန်ကလည်း အများကြီးရှိသေးသည့်အတွက် ဇာတ်ကားကို အရင်ပြီးအောင် ကြည့်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ ပြီးမှသာ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်လည်၍ ကြိုက်သည့်အကွက်များကို ရိုက်ကူးယူထားတော့မည်..။
အေးအေးဝင်း တီဗီကို ပြန်ကြည့်သည်..။ ကပ္ပလီကြီးက သတိလစ်နေသော တရုတ်မလေးကို ပုခုံးထက်တွင် ထမ်းတင်ကာ ကားပေါ်ပစ်တင်ပြီး ကားမောင်းထွက်သွားသည်ကို ပြသကာ ပြကွင်းပြောင်းသွားသည်..။ ပြန်ပေါ်လာသည့် ပြကွင်းသည် အိပ်ခန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်..။ တစ်ယောက်အိပ်ခုတင် တစ်ခု အခန်းထဲတွင် ရှိနေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးသည် တရုတ်မလေးကို ထမ်းကာ အခန်းထဲ ဝင်လာပြီး ခုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည်..။ တရုတ်မလေးသည် သတိရနေပြီ ဖြစ်သည်..။ ခုတင်ပေါ်တွင် ထထိုင်ကာ ကပ္ပလီကြီးကို အလန့်တကြားကြည့်နေသည်.။
“ ဘယ်လိုလဲ… နင်အခု ငါလိုးတာ ခံရတော့မယ်… မဟုတ်လား..၊ အေးအေးဆေးဆေး အလိုးခံရင် နင်သက်သာမယ်..”
ကပ္ပလီးကြီးက တရုတ်မလေးကို ကြည့်ပြီးပြောသည်..။ တရုတ်မလေးခင်မျာ စကားပြန်မဆိုနိုင်ရှာပါ..။ ကြောက်လွန်းသည့် အမူအယာဖြင့် ခေါင်းတစ်ခါခါ လုပ်ပြနေရှာသည်..။ ကင်မရာက ကပ္ပလီကြီးကို အနီးကပ် ရိုက်ပြနေသည်.။
“ ကဲ….အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်စမ်း…”
ကပ္ပလီကြီးက မာန်ပါပါ ပြောသည်..။ တရုတ်မလေး၏ အနီးကပ် ရိုက်ချက်ပေါ်လာသည်..။
ကောင်မလေးက ငိုမဲ့မဲ့ အမူအရာလေးဖြင့် ပြောသည်..။ အသံကလည်း တုန်ရင်နေသည်..။ အတော်ကို သရုပ်ဆောင် ပီပြင်သည်..။ နောက်ပြကွင်းက တရုတ်မလေး၏ အဝတ်များကို ကပ္ပလီကြီးက ဆုတ်ဖြဲ ဆွဲချွတ်ပုံဖြစ်သည်..။ ပထမဆုံး တရုတ်မလေး ဝတ်ထားသည့် ဘလောက်စ် အင်္ကျီကို ဆွဲဖြဲပစ်သည်။ နောက်တော့ ဘရာစီယာလေးကိုပါ ဆောင့်ဆွဲချွတ်သည်..။ ကောင်မလေး၏ အထက်ပိုင်း ဗလာကျင်းသွားကာ ဖြူနုထွားမို့သည့် ရင်သားလုံးလုံးဝန်းဝန်းများက တုန်ခါလျက် ပေါ်လာသည်..။ ထိုရင်သားများကို အနီးကပ် ရိုက်ပြရာ ဖြူနုနေသော ရင်သားမို့မို့များတွင် အကြောစိမ်လေးများ ယှက်သန်းနေပုံနှင့် လက်သန်းဖျားခန့်ရှိမည့် နို့သီးချွန်ချွန်လေးများ ကော့စူထောင်တက်နေသည်ကို အထင်အရှားမြင်ရသည်..။
အေးအေးဝင်းသည် အလိုလိုပင် သူမ၏ နို့သီးများကို ကိုင်ကြည့်မိသည်..။ သူမ၏ နို့သီးများမှာလည်း တရုတ်မလေး၏ နို့သီးလေးများလိုပင် လက်သန်းဖျားလောက် ရှည်ကာ ချွန်ကော့ ထောင်တက်နေသည်..။
ကပ္ပလီကြီးသည် ကုန်း၍ တရုတ်မလေး၏ နို့သီးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ယောက်ယမ်းကာ မိမိ၏ နို့သီးများကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ကြည့်မိသည်..။ မိမိ၏ နို့သီးများကို ကပ္ပလီကြီးက စုပ်ပေးနေသလားဟုပင် ထင်မိသည်..။ ပြကွင်းပေါ်တွင်တော့ ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေး၏ နို့တွေကို အားရပါးရပင် တအားစုပ်နမ်းနေသည်..။ နို့သီးများ သာမက နို့အုံကြီးတဝက်ခန့်ပင် ကပ္ပလီကြီး၏ ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေသည်..။ ဒါကိုကြည့်ရင်း အေးအေးဝင်းသည် သူမ၏ ရင်သားများကို အလိုလို ကော့ပေးမိသည်..။
တရုတ်မလေးသည် အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်နေသည်..။ လက်သီးဆုပ်များဖြင့် ကပ္ပလီကြီးကို ထုသည် ရိုက်သည်..။ အတင်းတွန်းပစ်သည်..။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ တွန်းဖယ်ပစ်၍ မရပါ..။ ကပ္ပလီကြီးက နို့သီး ဖြူနုနုလေးများကို အားရပါးရပင် စုတ်နမ်းနေလေသည်..။ ထို့နောက် ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေး၏ စကပ်တိုနံ့နံ့လေးကို အတင်းဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ရာ ဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးများသည် မလုံ့တလုံ အတွင်းခံပင်တီ ဘောင်းဘီတိုလေး၏ အကာအကွယ်ကြားမှ တစ်ထွက်၍ ပေါ်လာကြသည်..။
ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေးကို ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲချလိုက်သည်..။ ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လန်လဲကျသွားသည့် တရုတ်မလေးကို အနီးကပ်ရိုက်ပြသည်..။ တရုတ်မလေးသည် ပေါင်လေးကားလျက် လဲကျနေရာ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီခွဆုံတွင် မို့မို့လေး ဖောင်းအိနေပုံနှင့် ရင်သားအစုံ အိအိလေး တုန်ခါနေသည်တို့ကို အထင်းသာ မြင်နေရသည်..။ တရုတ်မလေး၏ မျက်နှာတွင်လည်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေသည့် ဟန်က အထင်အရှား ပေါ်လွင်နေသည်..။
ကပ္ပလီကြီးသည် ကုတင်ထက်သို့ တက်လာကာ တရုတ်မလေး၏ ပင်တီလေးကို အတင်းဆွဲချွတ်ပစ်သည်..။ တရုတ်မလေးက အတင်းရုန်းကန်ပြီး နှစ်ယောက်သာ ထွေးလားလုံးလား ဖြစ်နေပုံကို အတော်ကြာကြာ ရိုက်ပြထားသည်..။ တရုတ်မလေး၏ ပင်တီ ကျွတ်တော့မလို မကျွတ်တော့မလို ဖြစ်နေပုံမှာ ကြည့်နေရသူ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ကို ကျလိကျလိ ဖြစ်စေသည်..။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ကောင်မလေး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဘောင်းဘီလေး ကျွတ်ကွာကျကာ လုံးဝ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားရလေသည်..။
ကပ္ပလီကြီးလည်း ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေသော ကောင်မလေးကို မျက်လုံးများအရောင်တလက်လက်ထကာ ကြည့်နေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးသည် အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတော့ ဝတ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်..။ အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်မှ ထိုးထိုတောင်ထောင် ဖြစ်နေသည့် လီးကြီးမှာ တောင်မတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အေးအေးဝင်း မြင်ရုံနှင့် သိသည်..။
တရုတ်မလေးသည် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်သော ကပ္ပလီကြီးကို ကြောက်လန့်စွာနဲ့ ကြည့်နေရှာသည်..။ မည်းနက်ကာ တောင်မတ်နေသော လီးကြီးက အမြောက်ကြီးတစ်လက်လို မတ်မတ်ကြီး ထောင်လျက်သား ပေါ်လာသည်..။ ထို့နောက် ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေးကို အတင်းဖက်သည်..။ ကောင်မလေးက ရုန်းကန်သည်..။ ပထမဆုံး ရုန်းကန်နေသည့် တရုတ်မလေး၏ လက်နှင့်ခြေတို့ကို ကြိုးများဖြင့် တုတ်နှောင်သည်..။ ထို့နောက် အတင်းတက်ခွကာ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးသွင်းလေရာ တရုတ်မလေးမှာ ဘယ်လိုမှ ရုန်းကန်ခြင်း မပြုနိုင်သဖြင့် ကပ္ပလီကြီး လိုးသမျှ ခံရလေတော့သည်..။
တီဗီ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အထင်းသားအရှင်းသား မြင်နေရသည့် ကြမ်းတမ်းပက်စက်လှသော မုဒိန်းကျင့်မှု ပြကွက်များကို ကြည့်ရင်း အေးအေးဝင်း၏ စိတ်များသည် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရတော့လောက်အောင်ပင် သောင်းကျန်းတက်ကြွလာသည်..။ မိမိအဖုတ်ကို ပြန်ကာ လက်ဖြင့် ပွတ်မိသည်..။ ထို့နောက် စောက်စေ့ကို ပွတ်ချေမိသည်..။ နောက်ဆုံးတွင် တော့ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လက်ညှိုးထိုးထည့်ကာ ကလိလျက် တစ်ကိုယ်တည်း အာသာဖြေနေရသည်..။
ဤကဲ့သို့ ကိုယ့်အဖုတ်ကိုယ် ပြန်လည်ကာ လက်ညှိုးနှင့် ထိုး၍ ကာမရမ္မက် အာသာဖြေရသည့် အလုပ်မျိုး အေးအေးဝင်း မလုပ်ဖူးပါ..။ ယခု ရမ္မက်ဇောအဟုန် အလွန်ကြွကာ တဏှာထန်လွန်းလာမှုကြောင့် လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်နေမိရာ အရသာ အတော်တွေ့လျက် အဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကလိပေးနေမိလေတော့သည်..။
ကျော်မိုး သည် မိမိ၏ အကြံကို လုပ်သင့် မလုပ်သင့် အတော်လေး စဉ်းစား၍ နေသည်..။ ကျော်မိုးမှာ အသက် ၂၀ ခန့်ရှိသည်..။ လူသာငယ်သည် ကာမစပ်ယှက်မှု အတွေ့အကြုံတွေကတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ရှိနေသည်..။ သူသည် မော်တော်ကားမောင်းသည့် ဒရိုင်ဘာ အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသော်လည်း တကယ်တန်း စင်စစ်မှာတော့ သူကားမောင်းသည့် အလုပ်ရှင် အမျိုးသမီးများ၏ ပျော်တော်ဆက်အဖြစ် မြိုးမြိုးမြက်မြက် ရအောင် အကြံအဖန်လုပ်နေသည့် သူဖြစ်သည်..။
သူသည် အေးအေးဝင်းတို့ထံတွင် အလုပ်မလုပ်ခင်က ကုလားသူဌေး လူကုန်ထံများ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အတော်လေး အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်..။ ကုလားသူဌေးကတော် အတော်များများ၏ အိပ်ဖော်အဖြစ် ပျော်တော်ဆက်ခဲ့သည်..။ ထို့ပြင် မိန်းမလျာ ဖြစ်နေသော ကုလားသူဌေးသား အချို့ကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီး ဖင်လိုးကာ ငွေဝင်လမ်းဖြောင့်ခဲ့သည်..။ တိတ်တိတ်ပုန်း ကမြင်းကြောထကြသည့် ကုလားသူဌေးကတော်များ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အလိုးကောင်း အဆော်ကောင်းပြီး လီးကလည်း ကြီးလှသည့်အတွက် မြင်းသိုး ကျော်မိုး ဟူသော အမည်တစ်လုံးဖြင့် ကျော်ကြားနေခဲ့သည်..။
သို့သော် အသားမည်းမည်း ကုလားမများ ၊ အသားညိုညို ကုလားကပြားမများ ၊ အသားလတ်သော ကုလားမများကိုသာ လိုးခဲ့ဆော်ခဲ့ရသည့်အတွက် ကျော်မိုးသည် အသားဖြူဖြူဝင်းဝင်း တရုတ်မကို လိုးချင်သည့် စိတ်တွေ ပြင်းပြလာခဲ့သည်..။ သူကျင်လည် ကျွမ်းဝင်ရာနေရာများတွင် ကုလားမများနှင့် ကုလားကပြားမများသာလျင် ရှိနေရာ ကျော်မိုးအဖို့ လိုလားချက် ဆန္ဒ မပြည့်နိုင်ပဲ ရှိနေခဲ့ရာ ၊ အေးအေးဝင်းထံတွင် ဒရိုင်ဘာ အဖြစ် အလုပ်ရနိုင်အောင် အထူးပင် ကြိုးစားကြံစည် ခဲ့ရသည်..။
တရုတ်မစစ်စစ်ဖြစ်သော အေးအေးဝင်းထံတွင် အလုပ်ရနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း အေးအေးဝင်းကိုကား လိုးခွင့် မကြုံသေးပေ…။ ကျော်မိုး အဖို့လည်း ဘယ်လိုစရမည်မှန်း မသိ ဖြစ်နေသည်..။ ကုလားသူဌေးကတော်များနှင့် ဆိုလျင် ကျော်မိုးအနေနှင့် အထွေအထူး စနေဖို့ပင် မလို..။ အမျိုးသမီးများ ဘက်က စတင်ကာ ခင်းပေးသောလမ်းကို ကျော်မိုးက အသာလိုက်နင်းသွားရုံသာ ရှိခဲ့သည်..။
အေးအေးဝင်းကတော့ ဘယ်လိုမှ လမ်းခင်းမပေးခဲ့သည့်အတွက် ၊ ကျော်မိုးမှာ အခက်တွေ့နေသည်..။ သူအလွန်လိုးချင်နေသော တရုတ်မစစ်စစ်တစ်ယောက်နှင့် နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်ပါလျက် လိုးခွင့် မကြုံရသည့်အတွက် ကျော်မိုးမှာ နေ့စဉ်ပင် အလွန်အနေရခက် အထိုင်ရခက်နေသည်..။ အေးအေးဝင်းကို မှန်းဆစိတ်ကူးကာ ဂွင်းတိုက်၍ သာနေခဲ့ရသည်..။
ဒီနေ့တွင်တော့ အေးအေးဝင်းကို မုဒိန်းဝင်ကျင့်ရန် ကျော်မိုးက ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ အခါအခွင့်ကလည်း အတော်ကောင်းနေသည်..။ အိမ်တွင် ထမင်းချက် ၊ အစေခံများလည်း မရှိ ။ ခင်မောင်ကျော်ကလည်း အလောတကြီး ထွက်သွားရာ အိမ်ကြီးပေါ်တွင် အေးအေးဝင်းတစ်ယောက်တည်းသာ ကျန်နေခဲ့သည်..။ အိမ်ပေါ်သို့ အသာတက်ကာ အတင်းမုဒိန်းကျင့်လျင် အေးအေးဝင်း ဘာမျှ တတ်နိုင်မည် မဟုတ်..။ ပြီးတော့ မိမိ၏ ကာမစပ်ယှက်မှု ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပုံကိုလည်း ကျော်မိုးက အားကိုးအားထားသည်..။ မိမိအတင်းလိုးတာကို ခံရပြီးလျင် အေးအေးဝင်းက စွဲမက်သဘောကျသွားကာ မိမိ၏ အလိုးခံမလေး ဖြစ်လာမည်ဟု ကျော်မိုးက မျှော်လင့်ထားသည်..။
အကယ်၍ မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာပါကလည်း ကိုယ်လွတ်ရုန်းကာ ထွက်ပြေးဖို့လည်း ကြိုတင်ကြံစည်ထားသည်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အေးအေးဝင်းကို တော့လိုးဖြစ်အောင် လိုးရမည်..။ ထို့ကြောင့် ကျော်မိုးသည် သူနေထိုင်ရာ ကားဂိုဒေါင်အထပ်ခိုးပေါ်မှ ဆင်းကာ အေးအေးဝင်းတို့ အိမ်မကြီးဘက်သို့ ကူးလာခဲ့သည်..။ ခင်မောင်ကျော်က အလောတကြီး ထွက်သွား၍ သည်အတိုင် ဖွင့်ထားခဲ့သည့် တံခါးမှနေ၍ အိမ်ထဲသို့ အလွယ်ပင် ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်..။ တစ်အိမ်လုံး တိတ်ဆိတ်နေသည်..။ အိမ်အောက်ထပ်ရှိ အခန်းများထဲသို့ လိုက်ကြည့်ရာ အေးအေးဝင်းကို ဘယ်အခန်းတွင်မှ မတွေ့ရပေ..။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းများရှိရာသို့ ကျော်မိုးတက်လှမ်းလာခဲ့လေတော့သည်..။
ကျော်မိုး၏ စိတ်ထဲတွင် အတော်ပင် လှုပ်ရှားသွားသည်..။ သူသည် ခင်မောင်ကျော်နှင့် အေးအေးဝင်းတို့၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ တစ်ကြိမ်မျှ မရောက်ဖူးပေ..။ သို့သော် အိမ်အကြောင်း စူးစမ်းလေ့လာထားသူ ပီပီ အိပ်ခန်းတည်နေရာကိုတော့ သိသည်..။
အိပ်ခန်းနား ရောက်သည်နှင့် တပြွတ်ပြွတ် အသံများ ညည်းညူ ရေရွတ်သံများ မောသံများ ကို ကျော်မိုး စတင်ကြားရသည်..။ ခင်မောင်ကျော်များ တစ်ကျော့ပြန်လာကာ အေးအေးဝင်းကို လိုးနေဆော်နေလေပြီလားဟုပင် ကျော်မိုးထင်မိသည်..။ သေချာစေရန်အတွက်သာ ခပ်ဟဟဖြစ်နေသော တံခါးကြားမှ ချောင်းကြည့်လိုက်ရာ….။ ကျော်မိုးမှာ မျက်လုံးပြူးကာ ပါးစပ်ဟပြဲ သွားရတော့သည်..။
သူမြင်လိုက်ရသည်က အေးအေးဝင်းတစ်ယောက် ဗလာကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ကုတင်ထက်တွင် ပက်လက်လဲလျောင်းကာ သူမအဖုတ်ကို လက်ဖြင့် ပွတ်ကာ ထိုးဆွကာဖြင့် တစ်ကိုယ်တည်း သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်းနေမှုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် ထင်ဟပ်နေသော အပြာကား ပြကွက်များပင်တည်း..။ အခြေအနေမှန်ကို ကျော်မိုး ချက်ချင်း နားလည် လိုက်သည်..။ မိမိထင်ထားသည်ထက်ပင် အခြေအနေပိုကောင်းနေကြောင်းကိုလည်း ကျော်မိုး သဘောပေါက်လိုက်သည်.။ ကျော်မိုးသည် ခပ်ရဲရဲပင် အိပ်ခန်းထဲ လျှောက်လှမ်း ဝင်ရောက်သွားသည်..။
တီဗီပေါ်မှ မြင်ကွင်းများကို ကြည့်ပြီး သောင်းကျန်းချင်တိုင်း တစ်ကိုယ်တည်း သောင်းကျန်းနေသော အေးအေးဝင်းမှာ အိပ်ခန်းထဲသို့ ကျော်မိုး ဝင်ရောက်လာသည်ကို မသိသေး…။ အဖုတ်ကို လက်ဝါးစောင်းဖြင့် ပွတ်လိုက် ၊ အစေ့ကို ဆွဲချေလိုက် ၊ စောက်ခေါင်းထဲ လက်ချောင်း ထိုးသွင်းလိုက် ၊ နို့တွေကို ပြန်နယ်လိုက်နှင့် အရမ်းကို ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည်..။
“ ဘယ်လိုလဲ… အေးအေးဝင်း… ဖီလင်တွေ အရမ်း တက်နေပြီလား……”
ကျော်မိုးက အသံပြုလိုက်မှပင် အေးအေးဝင်း လန့်ဖြတ်၍ သွားကာ ဗလာကျင်းနေသော သူမ၏ ကိုယ်လုံးကို ဖုံးကာရန် ကြိုးစားသည်..။ ချွတ်ချထားသည့် ထမီကို ကမန်းကတန်းပင် လှမ်းယူသည်..။
“ အဝတ်တွေ ဘာတွေ ဝတ်ဖို့ ကြိုးစားမနေပါနဲ့တော့ ဗျာ…..”
ကျော်မိုး၏ အေးစက်စက် ပြောလိုက်သော လေသံက ပိုင်နိုင်လှသည်..။ ထိုသို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြောဆိုလိုက်သည့် စကားသည် အေးအေးဝင်း ကို ကျောစိမ့်သွားစေသည်..။ အေးအေးဝင်း မလှုပ်ရဲတော့..။ ထမီကို လက်ဖြင့် ကိုင်ရင်း ကျောက်ရုပ်လို ရပ်နေမိသည်..။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ကြုံရလိမ့်မည်ဟု အေးအေးဝင်း တွေးထင်မထားခဲ့မိ…။ မိမိတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တရုတ်တွေ လုပ်နေမိသည့်အတွက် ယခုလို အပြစ်ဒဏ် ခတ်တာ ခံရခြင်းဖြစ်မည်ဟူ၍လည်း နောင်တကြီးစွာ ရမိသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ကျော်မိုးကို စေ့စေ့ပင် မကြည့်ရဲ..။ မိမိဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည့်အချိန်တွင် ဒရိုင်ဘာရောက်လာကာ အားလုံးသိမြင်သွားရလေပြီဟူသော အသိက အေးအေးဝင်းကို အရှက်ကြီး ရှက်နေစေသည်..။
အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် ဒီအိပ်ခန်းထဲတွင် ကျော်မိုး ရှိမနေဟူ၍ အတင်းပင် မဲတင်းကာ တွေးကြည့်သည်..။ သို့သော် အဝတ်အစားများ ချွတ်နေသည့်အသံများက ကျော်မိုးရှိနေကြောင်း ဖော်ကျူးနေကြသည်..။ ထို့ပြင် ကျော်မိုးက မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယခုလို အဝတ်တွေ ချွတ်နေသည်ဆိုခြင်းကို စဉ်းစားမိပြန်ရာ အေးအေးဝင်းမှာ မျက်နှာပင် မထားတတ်တော့အောင် ဖြစ်ရလျက် ခေါင်းကိုသာ အတွင်ငုံ့နေမိတော့သည်..။
မိမိအနေဖြင့် ကျော်မိုးကို ဘယ်လိုမျှ ဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်ခြင် မပြုသာ..။ ကျော်မိုး၏ လက်ခုတ်ထဲက ရေဖြစ်သွားရတော့မည်ကို အေးအေးဝင်း ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်လိုက်သည်..။
သူမ၏ အိပ်ခန်းသည် ရုတ်တရက် သံလှောင်အိမ် အကျဉ်းခန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသလို အေးအေးဝင်း ခံစားရသည်..။ သူမအနေဖြင့် သည်အိပ်ခန်းထဲမှ ဘယ်လိုမှ ရှောင်တိမ်း ရုန်းမထွက်သာတော့..။
ကျော်မိုးသည် ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းရှိ အဝတ်များကို ချွတ်ပစ်ကာ အောက်ပိုင်းတွင် ဝတ်ထားသည့် ဘောင်းဘီရှည်သာ ကျန်တော့သည်..။ ကျော်မိုးသည် ဘောင်းဘီရှည်ကို မချွတ်သေးပဲ ကြောက်လန့်စွာ ရပ်နေရှာသည့် အေးအေးဝင်းထံ ချဉ်းကပ်လာသည်..။
အေးအေးဝင်းသည် သူမ၏ အသားဆိုင်များကို တတ်နိုင်သမျှ မပေါ်လွင်ရလေအောင် ခပ်ကုတ်ကုတ်လေး ရပ်နေသည်..။ သို့သော် ကျော်မိုးအနေနှင့်ကား တရုတ်မစစ်စစ်လေးတစ်ယောက်၏ ဗလာကျင်းနေသော ကိုယ်လုံးကို မြင်နေရသည်ကပင် စိတ်ရိုင်းတွေကို နိုးကြွနေစေသည်..။ အသားမည်းသော အသားညိုသော ကုလားမများ..၊ ကုလားကပြားမများ၏ ကိုယ်လုံးတီးများကိုသာ မြင်ခဲ့ရဖူးသော ကျော်မိုးအဖို့ တရုတ်မစစ်စစ်လေး၏ ဖြူနုနေသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်သည် မက်မောဖွယ်ရာပင်…။
အေးအေးဝင်းသည် ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေသည်..။ ခေါင်းကိုလည်း ငုံ့ထားမိသည်..။ ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်တို့ကြောင့် အသက်ရှူပြင်းနေရာ သူမ၏ မို့ဝန်းလုံးအိသော ရင်သားအစုံသည် နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နှင့် လှုပ်ရှားနေသည်..။
“ နင် နှာထ နေတာ မဟုတ်သလိုလို ဘာလိုလို ဟန်ဆောင်မနေနဲ့… တရုတ်မ..၊ နင့်ကိုယ်နင် ဘာတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ငါ ကောင်းကောင်းကြီး မြင်ရပြီးပြီ…၊ နင့်ဖာသာ နင် တစ်ယောက်တည်း စိတ်ဖြေနေတာထက် ကောင်းတာကို ငါလက်တွေ့ လုပ်ပြမယ်….၊ ဒီတော့ အိုက်တင် ခံမနေနဲ့တော့…။ ကဲ… ငါတို့ လိုးကြရအောင်….”
ကျော်မိုးသည် ခါတိုင်းဆိုလျင် အေးအေးဝင်းကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံသည်..။ ယခုတွင်တော့ မိမိဘက်က အပိုင်အနိုင် ကိုင်ထားမိပြီဖြစ်ကြောင်း ရိပ်မိသည့်အတွက် တမင်ပင် ရင့်ရင့်သီးသီး စကားလုံးများ သုံးကာ ပြောသည်..။ ထိုသို့ပြောရင်း ကျော်မိုးသည် တရုတ်မလေး အေးအေးဝင်းကို ဆွဲဖက်သည်..။ ထိုအခါတွင်မှ အေးအေးဝင်းသည် လျပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့် အတို့ခံလိုက်ရသလို လှုပ်ရှားသွားသည်..။
ကျော်မိုး၏ ဆွဲဖက်မှုမှ လွတ်အောင် အတင်းပင် ကန်ကျောက် ရုန်းထွက်သည်..။ သူမ၏ ရုန်းကန်မှုများသည် ဘာမျှ အရာမရောက်တော့..။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဂျူဒိုပညာ အတော်အသင့်တတ်ထားသူ ကျော်မိုးက ရုန်းကန်နေသော အေးအေးဝင်းကို ကောင်းကောင်း ချုပ်ထိန်းထားနိုင်သည်..။ အေးအေးဝင်းခင်မျာ ကျော်မိုး၏ ရင်ခွင်ထဲတွင် ကော့ကော့လေး ရောက်သွားသည်..။
လုံးဝန်းစူကြွနေသော ရင်သားနှစ်မွှာသည် ကျော်မိုး၏ ရင်ဘတ်ကျယ်ကြီးနှင့် အိခနဲ ထိကပ်မိသည်..။ ထိုသို့ ထိတွေ့မှုကြောင့် အေးအေးဝင်းတစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ ထကာ နို့သီးခေါင်းလေးများ ကော့ချွန်လာကြသည်..။ အေးအေးဝင်းမှာ အလိုလိုနေရင်း မောဟိုက်လာကာ ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်နေရတော့သည်..။ ရုန်းဖယ်ထွက်ရန်ပင် အားမရှိတော့…။
အေးအေးဝင်းသည် သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးကို ကျော်မိုး၏ ရင်ခွင်ထဲမှ တွင်တွင် လူးလွန့်နေရင်းက ငြင်းဆန်နေသည်…။
“ ကျမကို လွှတ်ပါ…. ဖယ်ပါရှင့်….၊ အို… အို.. တော်ပါတော့ရှင်…… ဒီ…. ဒီ လိုမလုပ်ပါနဲ့…. ဒါ… ဒါ အတင်း မတရား မုဒိန်းကျင့်တာ… ပဲ…ဖယ်… ဖယ်……..”
အေးအေးဝင်းက ပါးစပ်မှ အတင်းကြိုးစားကာ ပြောဆိုငြင်းဆန်သည်..။
“ နင်ကတော့ မုဒိန်းကျင့်တာလို့ ခေါ်ချင်လိမ့်မယ်….၊ ငါ့အနေနဲ့ကတော့ လိုးတာပါပဲ… ဟဲဟဲ……”
ကျော်မိုးက ရယ်မော ပြောဆိုသည်..။ ထိုအချိန်တွင် ကျော်မိုး၏ လက်တစ်ဖက်သည် အေးအေးဝင်း၏ ကားစွင့်အိစက်သော တင်ပါးဆုံကြီးကို အားရပါးရပင် ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေသည်..။ ဖင်းသားကြီးနှစ်ခုအကြားတွင်လည်း လက်ညှိုးကို ထိုးထည့်ထားသည်..။
“ နင့်ကို ငါရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ်….၊ တကယ်တော့ မုဒိန်းကျင့်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး…. မိန်းမတိုင်း အလိုးခံချင်ကြတာချည်းပဲ….၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှိတိုင်း အလိုးခံလို့ မသင့်ဘူးထင်တာကြောင့် မုဒိန်းကျင့် ခံရသလေး… ဘာလေး ပြောကြတာ…၊ နင်လည်း အတူတူပါပဲ…လေ..၊ နင့်စောက်ဖုတ်မှာ အရည်တွေ ရွှဲပြီး အလိုးခံချင်လွန်းလို့ ရွစိရွစိ ဖြစ်နေတာ နင်လဲ အသိပဲ…၊ ဒီတော့ ရုန်းမနေစမ်းပါနဲ့….၊ အလိုးခံမှာသာ ခံစမ်းပါ…၊ တရုတ်မရဲ့….”
ဒရိုင်ဘာဖြစ်သူ၏ ကြမ်းတမ်း နင့်သီးစွာ တစ်တစ်ခွခွ ပြောလိုက်သည့် စကားများကြောင့် အေးအေးဝင်းမှာ အလွန်ရှက်ပြီး အလွန်လည်း တုန်လှုပ်သွားသည်..။ သို့သော် ကျော်မိုး ပြောသလို သူမသည် အလွန်ပင် အလိုးခံချင်ကာ အဖုတ်ထဲတွင် အရည်ကြည်တွေ ရွှမ်းရွှမ်းဝေကာ စိုရွှဲနေရသည်ကလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အေးအေးဝင်း မငြင်းနိုင်…။ ဝန်ခံရပေမည်….။
ဗီဒီယို အပြာကားကြည့်ရင်း တက်ကြွခဲ့သော အေးအေးဝင်း၏ ကာမရမက်ဆန္ဒသည် လင်ယောက်ျား ခင်မောင်ကျော်နှင့် မစို့မပို့ စခန်းသွားခဲ့ရမှုကြောင့် ထိန်းမနိုင် တော့အောင် ဆူဝေကြွတက်ကာ အဖိုဓါတ်ကို အလွန်အမင်း လိုလား တမ်းတနေကြသည်..။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်၏ ထိတွေ့မှုကို အာသာငမ်းငမ်း စောင့်လင့်နေကြသည်..။ ဒါကိုလည်း အေးအေးဝင်းက နားလည်သည်..။
ထိုရမ္မက်စိတ်များ၏ လှုံ့ဆော်လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အေးအေးဝင်းခမျာ အတင်းရုန်းကန် ထွက်လိုလျက်နှင့် မစွမ်းသာ..။ ကျော်မိုး၏ အပြုအမူ အကိုင်အတွယ်များကို မလိုလားပါပဲနှင့် မငြင်းသာပဲ ဖြစ်နေရရှာသည်..။
ကျော်မိုးကတော့ အလွန်ပင် လက်သွက်နေသည်..။ ဖက်ပွေ့ထားသော အေးအေးဝင်းကို စောစောကပင် သူ့လင်နှင့် စိတ်တူကိုယ်တူ အပျော်ကျူးခဲ့ရာ ခုတင်ပေါ်သို့ ပွေ့တင်လိုက်သည်..။
“ ဟင့်အင်း….. ဟင့်အင်း….. လွှတ် လွှတ်….. ကျမကို လွှတ်……”
အေးအေးဝင်းသည် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားငြင်းဆန်နေရှာသေးသည်..။
“ နင်က အေးအေးသက်သာ လိုးတာကို မကြိုက်ပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အတင်းကျင့်တာမျိုးကို သဘောကျတာကိုး…။ ရပါတယ်…. ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နင်က ငါ့ကို လိုးပေးဖို့ နောက်ဆုံးမှာ တောင်းပန်ရမှာကတော့ သေချာပါတယ်…..”
အေးအေးဝင်း၏ ငြင်းဆန်ရုန်းကန်နေမှုများကို ကျော်မိုးက ဒေါသမထွက်မိပေ….။ သူသည် မိန်းမအတော်များများကို လိုးခဲ့ဖူးရာ နှာထန်နေသော မိန်းမများသာ ဖြစ်ပြီး ထိုအမျိုးသမီးများ၏ ရမ္မက်ဇောကို သူကပါဝင်ဖြည့်တင်းပေးရသည့် သဘောမျိုးသာ ဖြစ်ခဲ့သည်..။ ယခုမူ ငြင်းဆန်ရုန်းကန်နေသော အေးအေးဝင်းကို အပိုင်အနိုင် ကိုင်ကာ အရလိုးရမည်မို့ တစ်မူထူးနေသည်..။
ကျော်မိုး၏ လက်တစ်ဖက်က စောက်ဖုတ်ပေါ် ရောက်လာသည်..။ အကွဲကြောင်းအား လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့် မွှေသည်..။
“ တော်ပါတော့…. ရှင်…. တော်ပါတော့……… အို…… အဟင့်…..”
စောက်ခေါင်းထဲ လက်ချောင်း လျှောခနဲ ဝင်သွားရာ အေးအေးဝင်းခင်မျာ ကောင်းကင်ပေါ်မှ ကျလာသယောင် ခံစားရကာ ရင်ထဲ အေးခနဲ ဖြစ်သွားသည်..။ ကျော်မိုး၏ ကျင်လည်သော လက်များက စောက်စေ့ကို ဆော့ကစားလာပြန်သည်…။ ပွတ်ချေပေးသည်..။
အေးအေးဝင်းမှာ ဖင်တရမ်းရမ်း ရင်တကော့ကော့နှင့် ရမ္မက်သွေးတွေ ဆူဝေလာသည်..။ ပါးစပ်မှလည်း တဟင်းဟင်း အသံများ မြည်လာသည်..။
သတိတစ်ချက် လွတ်သွားသည်နှင့် ရမ္မက်ဇော အာရုံနောက် သွေးသားများ ပါဝင်သောင်းကျန်းကုန်ကြသည်…။ အေးအေးဝင်းသည် ဤအဖြစ်ကို နားလည်ကာ အားတင်းလျက် ရုန်းကန်ပြန်သည်….။ နှုတ်ခမ်းအား သွားဖြင့် တင်းတင်းကိုက်ထားရာ သွေးပင် စို့လာသည်..။ သတိလွတ်ကာ ရမ္မက်ဇောတွေ ဟုန်းခနဲ တက်ကြွမလာအောင် အားတင်းကာ နေရသည်..။
တရုတ်မလေး၏ နှုတ်ဖျားမှ တဏှာရမ္မက်ကြွသံ တဟင်းဟင်း စတင်ပေါ်လာသည်နှင့် သည်ပွဲတွင် မိမိ အောင်မြင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကျော်မိုး သဘောပေါက်သွားသည်..။ ခဏအကြာတွင် အေးအေးဝင်းက ရုန်းကန် ငြင်းဆန်လာပြန်ရာ အိန္ဒြေဆည်နိုင်ရန် အားခဲ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ကိုလည်း ကျော်မိုးက အကဲခတ်မိလိုက်လေတော့သည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 24,803
← မိုးလောက်ကြီး ချစ်ပါတယ်
သူဌေးမိန်းမသုံးယောက် နှင့် လင်ငယ်အကျဉ်းသားဘဝ →